लकडाउनका लागि यौन पार्टनर खोज्न सरकारको सल्लाह ! – hamrosandesh.com
लकडाउनका लागि यौन पार्टनर खोज्न सरकारको सल्लाह !
कोरोनाभाइरसका कारण विभिन्न देशहरु लकडाउन गरिएका छन् । युरोपेली देश नेदरल्याण्डमा लकडाउनको क्रममा पालना गर्नुपर्ने नियम पनि निकै कडा बनाइएको थियो । यो नियमको आलोचना भएपछि यहाँको सरकारले देशका सिंगल महिला तथा पुरुषहरुलाई यौनसाथी खोज्न सल्लाह दिएको छ ।
यहाँ लकडाउनका क्रममा लागू गरिएको नियमअनुसार केही शर्तहरु पालना गर्दै घरमा तीन जनासम्म बोलाउन पाइन्छ । यसबाहेक अहिले सरकारले यहाँका सिंगल महिला पुरुषलाई सेक्स पार्टनर खोज्न सल्लाह दिएको हो । द गार्डियनको समाचार अनुसार सेक्स पार्टनर खोज्ने क्रममा केही कुराहरुमा भने ध्यान दिन भनिएको छ ।
नेदरल्याण्डको नेशनल इन्स्टिच्युट फर पब्लिक हेल्थ एण्ड द इन्भायरमेन्ट (आरआइभीएम)ले भनेको छ कि सिंगल व्यक्तिहरुले एक अन्य व्यक्तिको साथमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरआइभीएमले यसरी सेक्स पार्टनरसँग बसेको अवस्थामा कसैमा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको अवस्थामा भने यौनबाट टाढा रहन भनेको छ । यसअघि नेदरल्याण्डमा सिंगल व्यक्तिहरुलाई सेक्सको लागि कुनै सल्लाह नदिइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
२३ मार्चदेखि नेदरल्याण्डमा लकडाउन र सामाजिक दूरी लागू गरिएको छ । यसअघिको गाइडलाइनमा सरकारले घरमा कोही आएको अवस्थामा दुई जनाबीच डेढ मिटरको दूरी राख्न भनेको थियो । यो नियममाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । आरआइभिएमको सल्लाहमा भनिएको छ – जसको सेक्स पार्टनर छैनन् उनीहरुले आफूजस्तै व्यक्तिहरुसँग बस्नको लागि आपसमा सम्झौता गर्न सक्छन् ।
यो सम्झौताको क्रममा दुई पार्टनरसँग अन्य कति व्यक्तिहरु भेट्न आउँछन् भन्ने कुराको पनि चर्चा गर्न भनिएको छ । किनकि जति धेरै मानिसहरुसँग भेटघाट हुन्छ उत्तिकै कोरोना संक्रमणको खतरा पनि हुन्छ ।